Iintlobo ze-SEO ezi-3 zenziwe ngokusisiseko nge-Semalt Expert
Abantu abachitha ixesha elide befunda malunga ne-SEO akuzona ezintsha kwiindidi ezahlukileyo ze-SEO. Abanye abantu b basebenzisa i-SEO njengephulo lokuthengisa. Kuxhomekeke kwisicwangciso esisebenzisiweyo okanye siwa kwiimpawu ezimhlophe, ezimnyama, okanye ezimpunga. Ngokusekelwe kukuhlaziywa kutshanje nguGoogle, umntu kufuneka aqonde ukuba ngoku, i-SEO kuphela eyabonwayo iqhinga elimhlophe lomkhwa. Isizathu kukuba ezinye ezimbini zivame ukuqhuba ukulungelelanisa ukulungelelanisa ukubeka indawo ephezulu kwi-SERP. Ukuthintela kwiziphumo ezimbi, i-hat (white) ye-SEO iqinisekisa abanikazi bewebhu iziphumo ezilungileyo. Ukubhala umxholo kunye nethemba lokuba liphezulu kwisithuba esiphakamileyo akusisicwangciso.
UAlexander Peresunko, enye yeengcali ezikhokelayo ezivela kwi Semalt , uchaza apha isizathu sokuba kubalulekile ukuvavanya i-SEO maqhinga kwinqanaba lomngcipheko.
I-White Hat ye-SEO
I-Google inqabile ukusebenzisa isakhiwo sokuqhagamshelanisa isakhiwo kwaye siqinisekisa ukuba sinemiphumo emibi ekumgangatho. Nangona kunjalo, akuyiyo yonke into yokuqhagamshelanisa isakhiwo ephosakeleyo. Ukuba abathengisi kufuneka bahlale kumgaqo-nkqubo abanako kwizakhiwo zokuqhagamshelana, kukho iindlela ezininzi zokukhetha. Phakathi komzekelo wengubo emhlophe, amaqhinga afaka ukwabelana ngokukhululekileyo kumxholo woluntu, ukudibanisa isakhiwo kunye ne-imeyile yokuthengisa..
I-hat ye-White SEO inzima ukuyigcina ngenxa yeendleko zayo. Ukuchitha iiyure ezininzi ukukhangela ukukhuthaza umxholo, ukukhangela izixhumanisi eziphukileyo, kunye nokwakha ubudlelwane kuya kubiza indawo. Umgca weso siza sinomngcipheko omncinci wokuhlaselwa yi-Google.
iGrey Hat SEO
Xa umntu efaka imali kwiimali ezixhamlayo, banciphisa umngcipheko jikelele ngokunciphisa imizamo yabo phezu kwamaqela amaninzi okanye iinkampani ukuze bafumane imali ngokukhawuleza, kodwa basengelahlekelwa yilahleko. I-Gray hat ye-SEO iquka ezinye iinjongo i-Google engavumelekanga ukukhawulezisa inkqubo yohlobo. Ingcipheko kule nto ikhokelela ekuqalisweni kwesiza. Iimpawu ze-gray hat SEO zifana nokuthengwa kwekhonkco, ukuthengwa kwemida yamandulo, nokuthenga iimpawu zentlalo. I-Google ayichasani ngokucacileyo ukufunyanwa kweempawu zentlalo kuba le ngcamango iwukuba isebenzise i-SERP.
Isikhumba somnyama se-SEO
I-hat ye-Black SEO xa umthengisi esika zonke iikona kwaye athathe isigqibo esifutshane ukuphucula izikhundla zeziko. Nangona kunjalo, njengawo onke ama-penny stocks, kukho ukukwazi ukulahlekelwa ixabiso elipheleleyo. Ngako ke, ezininzi zeetekethi ezimnyama zingakhokelela kwiGoogle ukucwangcisa ngokupheleleyo amaphepha ewebhusayithi. Zama kuphela isicwangciso somkhwa omnyama kwisayithi ongazibonanga njengexabiso.
Indlela engama-30 eyaziwayo yinto eqhelekileyo ukususela ngo-2014. Ingcamango emva kwayo kukunyusa i-traffic ngokusebenzisa umgangatho ophantsi kweemveliso, indawo yokwenza imali, kwaye ikhombe imimandla engama-20 ukuya kwi-domain. Xa umntu ehlaselwa, yakha enye idilesi kwaye uyijikeleze kwizinto ezikhoyo. Ingqiqo enhle de kubekho umntu obanjwe. Kwakhona, ukuthenga unxibelelwano lwezonxibelelwano zenethiwekhi yebhanki yinye iqhinga lomkhonto omnyama.
Iinkampani ezinkulu kufuneka zibe namava ngeentlobo ezintathu ze-SEO. Iindlela nganye zixhomekeke kwiinjongo zomnikazi wesayithi. Njengoko utyalo-mali, umnini-mhlaba makenze isigqibo sokuqala malunga nenjongo abafuna ukuyifumana ngaphambi kokukhetha iqhinga le-SEO Source .